Suufyada dabacsan ee jilicsan ee loo yaqaan 'Diamond Polishing Pads' waxaa loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo ama lagu dhejiyo granite, marble, dhagax dabiici ah iyo shubka la daweeyay. Dhex-dhexaadinta Dheemanka Dheemanka ayaa la socda taageerada Velcro waxaana lagu heli karaa qiimayaal kala duwan oo buuxa oo ah 50 illaa 3,000 #; suufka ugu dambeeya ee lagu xoqdo ayaa lagu heli karaa madow iyo caddaan. Dhex-dhexaadinta Dheemanka Dheemanka waxay si gaar ah u farsameeyeen qaabab loogu talagalay dabacsanaanta kordhaysa, socodka biyaha, iyo nolosha suufka
Dufanka dhogorta ee birta ah iyo cajaladda inta badan loo isticmaalo hoteelada, suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto, dhismayaasha ganacsiga ee heerka sare ah sida dhagaxa ama dabaqa terrazzo ee nadaafadda iyo daryeelka. Waxaa loo isticmaali karaa daawada mashiinka qiiqa. Cajaladda '0 # polishing disc' waxaa badanaa loo isticmaalaa walxaha dhagaxa jilicsan iyo dhagxaanta daruuraha; 1 #, 2 # waxaa lagu qarash gareeyay inta badan waxyaabo adag sida granite.